BASA RINO 2018 - Rwendo rwakanaka neTransfer Service Basel -
Gore roga roga muchitsime, Basel imusha kwevhiki kune mamwe makambani anonzi 1,800 anopa maziso avo uye zvishongo zveBazelword. Vakarongeka vekukosha kwekutengeserana uku kwakakosha vasina kunyunyuta pamusoro pekukosha kwevashanyi. Kuwanda kwevashambadziri ve100,000 nevamiriri veavo vese vanotengeserana kuti vauye kuWorld Fair ye Watches uye Jewelery. Musi waChishanu 22, 2018 masuo ezvakanaka achazarurirwa vashanyi.
Newe mutyairi wako pachako ku BASELWORD - Transfer Service Basel
Yedu EuroAirport Basel inongova maminetsi mashomanana kubva pamusangano. Asi zvechokwadi - kufanana nevamwe vakawanda vanofamba nebhizimisi - unoda kushanyira vhizimisi 'kuratidza kwemazuva anoverengeka. Nenguva isipi vatakuregi vedu vari kunyanya kushandisa zuva rakaoma zvikuru mugore rebhizimisi rebhizimusi. Ndicho chikonzero nei tichipa basa rekutyaira rega yeBaselworld.
EuroAirport kunzvimbo yako yekugadza. Famba maratidziro mu kutanga-class limousine yeGerman design uye usanetseka pamusoro pemigwagwa yakaoma kana nzvimbo dzekupaka pamusangano. Mukuwedzera kune nguva uye kuchena kwevatakuri vedu, isu takakurumbira pakati pevatengesi, nokuti tinoteerera kungwara kukuru pavanenge vachifambisa.
Basa rekutumira Basel nyore nyore paIndaneti
Tinoziva-nguva ndiyo mari. Ndicho chikonzero takaisa online booking chida kwauri. Neawa imwechete yekufambisa nguva, isu takagadzirira iwe semugove wega-limousine uye mutyairi pamberi pehotera yako kana ku-airport pane nzvimbo yekuuya uye yekuenda.
Sangano reBasel rekufambisa basa rinokumbira iwe unofadza kugara paBaselworld uye nguva dzose yebhizimisi yakanaka
Akaiswa mu: Airport shuttle muBasel Baselworld Transfer service
taxi.flughafen March 16, 2017 November 18, 2017 Uncategorized Hapana mhinduro
← BASA RINO 2018 - Yakanaka kufamba neTransfer Service Basel
Guta rekufamba uye kuona mahofisi neTransfer Service Basel →